Sirta SSC Heshay: Been Casriyaysan! | isbeddel
← !شـئ من الحزن المتجدد
FARRIINTA FOORE: Wasaaradda maaliyadda iyo waayaheeda →
Sirta SSC Heshay: Been Casriyaysan!
Wq. Maxamed Baashe X. Xasan
“Beeni raad ma leh, lug keliyey leedahoo marka la qabtay kuftaa”!
Beryahan dambe waxa isa soo tarayey oo ku soo badanayey baraha internetka ee taageera kacdoonka SSC dacaayado wada been abuur ah iyo dhacdooyin aan sal iyo raad midkoodna lahayn. Been abuurkaas sida aadka ah loo fidiyay waxa ugu horreeya xasuuq, dad kaarayaal iyo taangiyo la jiidhsiiyey, hablo maadh doonasho ah iyo haween rasaas la mariyey, caydi gacmaha iyo lugaha xidhig xaskul ah lagaga laba dibleeyey oo geed laga soo laalaadiyey iyo dhinaca kale ciidamo cartamaya oo dhirta jejebinaya oo tobanaan baabuur oo gaashaaman wata oo halgaamaa SSC ah lagu sheegay, oo haddana ka dagaalama Darfur (xadka u dhexeeya Suudaan iyo Chad)! Intan iyo qaar kale oo beennimadooda laga xishoon jireyba, waynu u soo joogney, dhawrkii bilood ee u dambeeyey, gaar ahaan wixii ku sinnaa dhacdadii foosha xumayd ee Kalshaale ee dhowaan xabaalaha lagu ridey. Hadafku waa in la kiciyo dadka goboladaas ku dhaqan, gude iyo dibadba.
Waxa se ugu daran tan u dambaysey ee hadda uu raadkeedu sii qoyan yahay ee ku saabsan waxa loogu yeedhay SIRTA laga helay mas’uuliyiin ka tirsan dawladda Somaliland. Sirtaas oo ah waraysiyo khadka teleefanka ah oo talantaalli ah sida ay inna leeyihiin oo lagula kala yeeshay madax ay ka mid yihiin Maxadaweyne Axmed Maxamed Siilaanyo, Chief of Cabinet-kiisa Xirsi X. Xasan, Guddoomiyaha Xisbiga Ucid Faysal Cali Waraabe, Wasiirka Gaashaandhigga Axmed X. Cali Cadami, Taliyaha Ciidamada General Nuux Taani iyo Maxamed Kaahin Axmed.
Dad badan bay arrintani yaab ku keentay markii hore, hase yeeshee yaabkaasi waxa uu hoos u sii dhacayey mar kasta oo tirada mas’uuliyiinta la waraysanayaa sii bataan. Waxa kala oo dadka qaar markiiba ka wayiigeen sida ay u suurta geli karayso in qof mas’uul ahi isaga warramo teleefan ahaan qof aanu garanayn, isla markaana uu uga oggolaado inuu la yeesho waraysi u dhigma kii BBC ama VOA iwm. Waxa kale oo iyana dad badan macquul ugu muuqan waydey in mas’uulkaasi uu wuxuu ka doono isaga sheego qofkaas aan horjoogin, isla markaana aanu xaqiijin karin qofka uu yahay.
Illaa hadda dad badan ayaa, dhinaca kale, weli si xooggan u rumaysan in waraysiyadaasi ay run biyo-kama-dhibcaan ah yihiin oo si dhegweyni iyo hebednimo ah mas’uuliyiintaas loogu wanjalay khadadkaas teleefan. Dadkaasi xujada ay magansanayaan waa isu ekaanta codadka la duubay iyo kuwa mas’uuliyiinta la tilmaamayo in la waraystay. Waa dhab oo codadka duubani waxa ay muujinayaan kuwoodii oo car iyo bey la’! Teeda kale mas’uul waliba waxa tooyashadiisu inta badan ku dacal dhebaysaa hirarkii uu inta badan ka hadli jirey dabuub iyo dooc ahaanba.
Haddaa maxa SSC lagu haystaa!
Hibooyinka dadka aadmiga ah waxa ka mid ah jilidda iyo canjilaadda. Dadka qaar, dhif iyo naadir ah’ ayaa awood u yeesha in ay canjili karaan qof kasta codkiisa ama dadka qaar codkooda, jilina karaan qof kasta dabeecadaha hab dhaqankiisa. Taas oo jirta haddana waxa maanta tan looga maarmaa adeegsiga technologiyada casriga ah oo suurta gelisa canjilaadda inta badan dhammaan wixii aadanuhu samayn jirey, af iyo addinba. Waa halkan meesha laga raadin karaa macnaynta beenta mala-awaalan ee waraysiyadan. Waxa jirta aalad afka qalaad lagu yidhaahdo “AV Voice Changer Software”. Qalabkani waxa uu awood u leeyahay inuu cod kasta u bedeli karo codka kale ee lala maaggan yahay isla doonasho ahaan. Tusaale ahaan waxa aad soo qaadanaysaa cod hore looga duubay Madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo iyo cod kale oo kuu diyaar ah oo aad adigu leedahay, dabadeedna waxa aad ku amraysaa qalabku inuu codkaaga kala mid dhigo canjilaad ahaan kii Axmed Siilaanyo ee kuu diyaarka ahaa. Halkaas ayaa waxa soo baxaya codkaagii oo beddelan oo la moodo kii Axmed Siilaanyo oo aan biyo-is-marin. Qalabkani qaali ma’aha oo waxa uu suuqa hadda ka joogaa £42.91 oo dhigma $68.66.
Aaladdan ayaa u muuqata haddaba in ay tahay hal-alooseenka casriga ah ee lagu haloosiyey been abuurkan ugu dambeeyey ee la magac baxay Sirta SSC-du heshay. Wixii faahfaahin dheeraad ah ee aaladdan ku saabsan, fadlan, xagga hoose booqo: “Change your voice into someone famous” (http://av-voice-changer-software.en.softonic.com/)
Posted by Warfaa on Maarso 23, 2011 in Uncategorized